15aad International gvSIG Shirka - maalinta 1
Shirka 15aad ee caalamiga ah ee gvSIG wuxuu bilaabmay Nofeembar 6, Dugsiga Sare ee Farsamada Sare ee cilmiga Geodetic, Cartographic and Topographic Engineering - ETSIGCT. Furitaanka munaasabada waxaa fuliyay masuuliyiinta jaamacada Polytechnic University of Valencia, Generalitat Valenciana iyo agaasimaha guud ee gvSIG Alvaro Association ...
Geospatial - GIS, GvSIG, tabo cusub
Dugsiga Farsamada Sare ee cilmiga Geodetic, Cartographic iyo Topographic Engineering (Jaamacadda Polytechnic University of Valencia, Spain) ayaa martigalin doonta, ilaa sanad kale, gvSIG International Conference , oo la qaban doono 24-ka ilaa 26-ka Oktoobar iyada oo halku-dhig looga dhigay "Dhaqaalaha iyo wax soo saarka" . Inta uu socdo shirku waxaa jiri doona kal-fadhiyo mawduucyo kaladuwan ah oo lagu soo bandhigi doono (maamulka degmada, xaaladaha degdegga ah, beeraha ...), waxaana jiri doona ...
Dhiirigelin qiimo leh oo loogu talagalay gvSIG - Abaalmarinta tartanka Europe
Way fiicantahay in la ogaado in gvSIG uu helay abaalmarin caalami ah intii lagu jiray tartankii dhawaa ee Europe. Abaalmarintan waxay fursad u siineysaa mashaariicda u keenaya hal-abuurnimo iyo xalal waara bulshada adduunka. Dabcan, haddii ay ku daraan qiime dheeraad ah INSPIRE Initiative oo ay adeegsadaan tikniyoolajiyadda laga heli karo ...
GvSIG, tabo cusub
Waxaan ku dhawaaqeynaa bilowga nidaamka diiwaangelinta Koorsooyinka Fogaanta-gvSIG-Training, oo leh cut labaad sanadkii 2014, kuwaas oo qayb ka ah barnaamijka shahaadada Ururka gvSIG. Munaasabadda sanad-guurada tobnaad ee mashruuca gvSIG, koorsooyin badan ayaa la dhimay, koorso bilaash ah ayaa sidoo kale lagu daray ...
Waa maxay nooca cusub ee gvSIG 2.0
Anagoo rajayn weyn leh waxaan ku dhawaaqeynaa waxa ay gvSIG Association soo gaarsiisay: nooca ugu dambeeya ee gvSIG 2.0; Mashruucii si xoogaa barbar socda ugu shaqeynayey horumarkii 1x iyo illaa iyo hadda wuxuu na sii daayey annaga oo ku qanacsan 1.12. Noocyada cusub, noocani wuxuu leeyahay qaab dhismeed cusub oo horumarineed, ...
Qalabka GIS 3, oo ku dhowaad wax kasta oo ka yimid USB
Nooca saddexaad ee GIS la qaadan karo ayaa lagu dhawaaqay, waa qalab aan dib u eegnay seddex sano ka hor, kaliya markii nooca 2 la bilaabay bishii Julaay 2009. By the way, waxaan xasuustaa markaan u adeegsaday ayaamihii xiisadda dimoqoraadiyadeed ee Honduras nagu qasbay inaan ka shaqeyno guryaheena, iyo ku dhowaad ...
gvSIG Batoví, qaybinta ugu horreysa ee gvSIG ee Waxbarashada ayaa lasoo bandhigay
Jimicsiga caalamiga ah iyo awood-siinta ay daba socoto gvSIG Foundation waa mid xiiso leh. Ma jiraan khibrado badan oo la mid ah, waligood hore uma baahna barnaamij bilaash ah oo software ah sida hadda, iyo aragtida guud ahaan qaaradda oo dhan oo wadaagta luqad rasmi ah ayaa xiiso leh. Gaaritaanka heerka ganacsigu wuxuu lahaa bilowgiisii, isagoo gaarey heer aqooneed ...
Laga soo bilaabo i3Geo iyo 57 qalabka softiweeriyada Dadweynaha reer Brazil
Maanta warku wuxuu yimid isdhexgalka dadaallada u dhexeeya i3Geo iyo gvSIG, mowduuc aniga ila muuqda inuu yahay go'aan muhiim ah aasaaska gvSIG, in kasta oo aan ka warqabo inay si dhib yar u tahay natiijo muuqata oo ka timaadda dhammaan shaqooyinka qaadanaya bilaha qorsheynta istiraatiijiyadda caalamiga ah. Bogag kale ayaa ka hadli doona wax badana waan ogaan doonaa ...
Xaggee dadka isticmaala gvSIG
Maalmahan webinar ku yaal gvSIG ayaa la soo bandhigi doonaa si wax badan looga barto mashruuca. In kasta oo ujeeddada xooggan ee tan ay tahay suuqa Boortaqiiska ku hadla, maadaama lagu sameeyay qaab-dhismeedka dhacdada MundoGEO, baaxaddiisu way sii socon doontaa, sidaa darteed waxaan fursad ugu helnaa inaan ku falanqeyno qaar ka mid ah tirooyinka ku jira ...
GvSIG, Internet iyo Blogs
In ka badan 40 mowduuc oo suurtagal ah oo lagu fulin doono Shirka Lixaad ee SIG ee Girona ayaa lagu dhawaaqay. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah dhacdooyinka ku jira macnaha isbaanishka ee saameynta ugu weyn ku leh aragtida OpenSource ee ku wajahan Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed. Muunad ahaan, waxaan kuu daynayaa 10 heesood oo leh ...
Dhowr bilood ka hor waxaan idiinkala hadlayey Kiniiniyada loo yaqaan 'GIS Pills' ee Geographica, anigoo la soconaya waxa ay shirkaddani qabato.Maanta waxaan rabaa inaan kaaga warramo waxa ku soo fool leh sannadka 2012 marka la eego tababarka la siinayo ee ku saabsan aagga geospatial 1. Koorso ku saabsan ArcGIS, gvSIG, QGIS iyo xalalka kale ee Joomatics Tani ...
Fur Planet, 77 Bog si aad Maskaxdaada u Bedesho
Waxay ahayd sanad aad u firfircoon shirarka gvSIG, waxaan ku yeelanay Talyaaniga, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska - qaab dhismeedka wadamada Francophone-, Uruguay, Argentina iyo Brazil - Latin America- iyo sidii dhaqanku ahaa, daabacaada Fur Planet oo la socda shirarkii caalamiga ahaa ee gvSIG dhawaan. Laakiin ma aha…
GvSIG OS majallado
Qorshaha Maareynta Degdegga ah (GEMAS) xulo gvSIG
Waxaa nalagu ogeysiiyey hirgalinta barnaamijyada gvSIG ee howlaha ku wajahan maareynta xaaladaha degdegga ah, sidaa darteed waxaan ku faafineynaa annaga oo aaminsan in ay waxtar u yeelan karto dad badan. Gobolka Mendoza ee Jamhuuriyadda Arjantiin waa dhul nugul sababo la xiriira xaaladdiisa juqraafi ahaan waxaana si isdaba joog ah u saameeya ifafaale kala duwan oo dabiici ah: ...
GGL luqadda geoprocessing heli karaa gvSIG
gvSIG ayaa hada daabacday, in natiijada Google xagaaga ee koodhka ee mashruuca gvSIG, gvSIG plugin loogu talagalay GGL ayaa hada lasoo saaray. GGL waa luuqad barnaamij gaar ah oo loogu talagalay geoprocessing taas oo aad ka heli karto dhismooyinka caadiga ah ee luqadaha barnaamijyada ugu caansan (siddo, shardi, iwm.) Iyo ...